KNU hna nih cun PDF le G.Z hna hi hmuhnak kip ah dam in kachiah lai lo ati, achung bia ah tlingte in, – Kawltu Team
KNU hna nih cun PDF le G.Z hna hi hmuhnak kip ah dam in kachiah lai lo ati, achung bia ah tlingte in,
August 29, 2021 August 30, 2021 Pu Tawn Mang
Ram tang ah thah mi chung ah Nu hna Dr. hi 45 le Pa Dr. hna hi 35 hna an itel, adih lak in rape tlaihhrem hnu ah thah asi tiin, atu bantuk thah-i, athi mi hna hi Nu le pa sin ah cun Malaria zawtnak ruang ah athi tiin an chim hna, asi nain alu ah kuan alut mi zong malaria ruang ah athi an ti, ram tang ah thah asi mi PDF lists hna cu:-
KNU ah PDF Pa hna cu 1342 an si, Nu hna cu 256 an si,
KIO ah PDF Pa hna cu 342 an si, Nu hna cu 46 an si,
KNPP ah PDF Pa hna cu 187 an si, Nu hna cu 19 an si,
CNF ah PDF Pa hna cu 98 an si, Nu hna cu 13 an si,
KNDO ah PDF Pa hna cu 543 an si, Nu hna cu 76 an si,
National Unity Government NUG ah Dalan/spy tiah lists an pek ruang ah thah asi, Nu le Pa hna nih athi tiah fiannakaum lo caah thutpi nak tibantuk hna an tuah piak lo, Mah cu tu lio kan ram chung thil cang mi hna an si tiah news report nak ah langhter asi.
KNU က အကြမ်းဖက် PDF.Gz များကို တွေ့တဲ့နေရာ အရှင်မထားပါဘူးတဲ့.
တောထဲမှာအသတ်ခံရတဲ့ သူတွေထဲမှာ အမျိုးသမီး.ဆရာဝန် .45 ဦး ဆရာဝန်လောင်း35ဦးပါတယ်. အားလုံးက Rapeကျင့်ပြီးမှ အသတ်ခံရတာ ခုလိုအသတ်ခံရတာ မိဘတွေမသိကြဘူး ငှက်ဖျား ကြောင့်သေတယ်လိုပဲ ပြန်ပြောပြခဲ့တာရေမွန်ကိုကြည့် ခေါင်းမှာကျည်ဝင်ရာနဲ့ဒါလည်းငှက်ဖျားဘဲတဲ့..
တောထဲမှာအသတ်ခံရတဲ့ PDF စာရင်း
KNU မှာ PDF အမျိုးသား 1342 ဦး, အမျိုးသမီး 256 ဦး,
KIO မှာ PDF အမျိုးသား 342 ဦး, အမျိုးသမီး 46 ဦး,
KNPP မှာ PDF အမျိုးသား 187 ဦး, အမျိုးသမီး 19 ဦး,
CNF မှာ PDF အမျိုးသား 98 ဦး, အမျိုးသမီး 13 ဦး,
KNDO မှာ PDF အမျိုးသား 543 ဦး, အမျိုးသမီး 76 ဦး,
NUG မှ သူလျိုဟုစာရင်းပေးပို့၍ သတ်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း မိဘများမှ သက်ပျောက် ဆွမ်း ရက်လည်ဆွမ်း မပြုလုပ်ပေးကြပါ က သူတို့ဘဝ မတွေးရဲစရာပါ”
← Nancy Pelosi cu Media hna nih bia hal an timh, leh ngam lo in atli tak diam, afghan ram kong ah acoyah thar adir lai??
August 31 cu anai chin leng mang cang min lists an pek mi cu tih nung dirhmun ah an dir fawn, America nih zei tin dah hma an lak lai?? →